Features | Radio Himilo | Page 20
radio himilo July 30, 2017	Features, Wararka Leave a comment 58 Views
Muqdisho – Haddii aad kamid tahay dadka qaar oo aalaaba ka cawda socdaalka maalinleed ee shaqadiisa, sheekadan waxay ugu yaraan ku gelinaysaa xaalad degan. Nin ku nool Los Angeles kaas oo ka shaqeeya San Francisco ayaa lixda saacadood ee safarkiisa ...
30 July – Maalinta Caalamiga ee Saaxiibtinimada.
radio himilo July 30, 2017	Features, Wararka Leave a comment 65 Views
Muqdisho – Dunideennu waxay wajahaysaa caqabado badan, musiibooyin iyo awoodo kala dhantaalaya midnimadeenna – sida saboolnimo, rabshado, ku xad-gudubka xuquuqda Insaanka iyo in kale – tanina waxay wiiqaysaa nabadda, nabad-gelyada, horumarka iyo xasiloonnida bulshooyinka caalamka. Si looga hortago musiibooyinka iyo ...
Nin subax kasta webi kaga soo dabaasha aqalkiisa ilaa goobtiisa shaqada.
radio himilo July 29, 2017	Features, Wararka Leave a comment 107 Views
Muqdisho – Badi socotada magaalada Munich ee dalka Jarmalka waxaa saacado badan kaga baxa socdaalka jidadka mashquulka iyo jaamka la tiictiicaya subax walba, hayeeshe 40-jirka lagu magacaabo Benjamin David, socdaalku wuxuu dhabtii kaga dhigan yahay waaya’aragnimo raaxa leh. Maalin kasta ...
radio himilo July 29, 2017	Features, Wararka Leave a comment 68 Views
Muqdisho – Maalinta Caalamiga ee Cagaarshowga waxaa la xusaa 28 July sanad kasta si dunida loogu mideeyo kor u qaadista wacyiga la xiriira mushikiladda guud ee cudurka iyo in lagu dhiirr-geliyo is-baddal dhab ah. Waa maalin fursad looga dhigay biirinta ...
radio himilo July 26, 2017	Features, Wararka Leave a comment 50 Views
Muqdisho – Laba walaalo ah ayaa adeegsaday wajiga madax-weynaha dhawaan la doortay ee Donald Trump si aan loo garan xilli ay rabeen inay lacag caddaan ah ka xadaan dhowr xarumood oo ATM, marka loo eego booliska dalka Talyaaniga. Bilayska Turin ayaa ...
radio himilo July 25, 2017	Features, Wararka Leave a comment 63 Views
Muqdisho – Isu-tagga midowga shirkadaha bixiya korontada wuxuu irid laba fursad u furan u noqday dadka iyo saamileyda ku midaysan. Taniyo markii ay meesha ka baxday wakaaladda xoogga korontada qaranka ee Eneeyo, shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya adeeg koronto ...
radio himilo July 24, 2017	Features, Wararka Leave a comment 59 Views
Muqdisho – Hooyo ayaa cunugeeda yar ka iibsatay kuwa dadka ka ganacsada ‘Human Traffickers’ waayo waxay rabtay inay hesho lacag ay ku gadato mooto , marka loo eego booliska dalka Nigeria. Bilayska Anambra ayaa sheegay inay xireen 24-jirta lagu magacaabo ...
radio himilo July 24, 2017	Features, Wararka Leave a comment 74 Views
Muqdisho – 60-jirta Atifa Ljajic iyo seygeeda, Serif Nokic oo 68-jir ah kuna nool dalka Serbia waxay isku dayi jireen helidda cunug ay dhalaan muddo 20 sano ah. Markii qofna uusan rumeysan in hadda kadib ay wax dhalayaan, tii Alle ...
radio himilo July 24, 2017	Features, Wararka Leave a comment 71 Views
Muqdisho – Qoys Shiinaha ku nool ayaa la uurxun nin afadiisa daldoorsaday kadib markii ay la xaraarugtay xanuun kaga yimid ilma-xaaqis ay isku samaysay muddo afar jeer ah. Haweeneyda oo ku noolayd gobalka Anhui, Shiinaha ayaa dhawaantan geeriyootay kadib markii ...
radio himilo July 24, 2017	Features, Wararka Leave a comment 50 Views
Muqdisho – Laan boolis ayaa aad ula shaamareertay yeermada cabasho kaga timid nin kaas oo macmiil maqaaxi uu ku jiray kaga sheeganaya diidistiisa ku aadan biya-raacinta musqusha uu kasoo baxay, marka loo eeg booliska Kanada. Booliska Toronto ayaa sheegay in ...